Furayaasha doorashada daboolka duvet | Bezzia
Maria vazquez | 14/09/2021 12:00 | Guriga
Miyuu qadiimkaagii hore ee Nordic -ku siinayaa dharbaaxadiisii ​​ugu dambaysay oo miyaanay mar dambe u qalmin inaad mar labaad u dirto dhar -dhaqidda? Ma leedahay qol cusub oo ma rabtaa inaad ku beddesho gogoshaada buuxinta Waqooyiga Yurub? Haddii aadan waligaa la kulmin gadashada duvet, waxaad u baahan doontaa furayaal si aad u ogaato sida loo doorto midka ugu habboon.
Waxaa jira fursado badan oo kala duwan marka laga hadlayo iibsashada Nordic. Sidee loo ogaadaa markaa, keebaa ugu wanaagsan? Bezzia maanta waxaan isku daynaa inaan kugu hagno hannaankan wax iibsiga, adiga oo faahfaahinaya waxa ay tahay inaad eegto, waxa waxa ay tahay inaad maskaxda ku hayso si aad wax u iibsato.
1 Buuxinta dabiiciga ah ama dardaro?
1.1 Buuxiyeyaasha dabiiciga ah
1.2 Buuxiyeyaasha dardaro
Buuxinta dabiiciga ah ama dardaro?
Alaabta buuxisa waa qodob go'aaminaya gaadho awood ku -daboolid ku filan. Waxaa jira buuxiyeyaal dabiici ah iyo soo -buuxiyayaal isku -dhafan oo ah fiilooyinkii caadiga ahaa, fiilooyinkii godan ee polyester -ka ama microfibers. Ogaanshaha faa'iidooyinka iyo qasaarooyinka mid kasta oo ka mid ah agabka ayaa kaa caawin doona inaad gaarto go'aankaaga koowaad.
Buuxiyeyaasha dabiiciga ah
Markaan ka hadlayno buuxinta dabiiciga ah waxaan ka hadalnaa baalasha ama hoos. Buuxinta baalasha Waxay ka mid yihiin bakooradda ka dhigaysa mid aad u culus, oo aan ka farxinayn taabashada oo siinaysa awood dahaarid kuleyl oo liita marka la barbar dhigo hoos.
Buuxinta hoose way fudud yihiin waxayna leeyihiin sifooyinka kulaylka ugu fiican. Sida weyn ee hoos loogu isticmaalo buuxinta, waxaa la abuuraa tiro badan oo qolalka hawada ah, taas oo u oggolaan doonta wareegga wanaagsan sidaasna si fiican loogu qaybiyo kulaylka iyo uumi -bixiyaha dhaqso leh.
Si aad u ogaato nooca hoos loo isticmaalay waa inaynu hagnaa a qiyaasta caadiga ah ee loo yaqaan Fill Power. Tani waxay muujineysaa mugga ku jira 28,35 g. hoos xaaladaha caadiga ah. Sidaa darteed waa hab lagu qiyaaso tayadiisa. Buuxinta ugu wanaagsan ee Waqooyiga Yurub ee suuqa waxay u muuqataa inay ku dhowdahay Awood Buuxi oo ah 9 ama 10, cabir ahaan 10.
Faa'iidooyinka qallafsan ee buuxinta hoos -u -dhaca dabiiciga ah ayaa iska cad, sidaa darteed doorashada ugu qaalisan suuqa. Mid kale laakiin wuxuu kaloo naga niyad -jebin karaa inaan ku khamaarno noocaan buuxiyeyaasha: xaqiiqda ah inaan ku qasbanaan doonno u tag nadiifiyaha qalalan si aad u nadiifiso.
Waxaa laga samayn karaa fiiloyin caadi ah, fiilooyin polyester bannaan ama microfibers. Dhammaan oo leh neefsasho, waxay ka hortagtaa faafinta fangaska waana hypoallergenic. Buuxinta microfiber -ka ayaa ah kuwa sida ugu wanaagsan ugu dayan kara dabiicadda, xagga mugga iyo awoodda dahaarka labadaba. Si kastaba ha noqotee, waa inaad ogaataa in isla waxqabadka kuleylka iyo dahaarka kuleylka, buuxinta dardaro mar walba ay ka culus tahay tan hoose.
Waxaa ka mid ah faa'iidooyinka waaweyn ee buuxiyeyaasha dardaro -doonka ah qiimaheeda, jaban ka badan kan duvets hoos. Mid kale oo ka mid ah faa'iidooyinkeeda ayaa ah fududeynta dhaqidda; sidaas darteed noqoshada ikhtiyaarka ugu caansan qolalka carruurta iyo / ama guryaha labaad.
Samaynta qolalka hawada ee duvet -ka gudaheeda ayaa fure u ah hagaajinta awoodeeda qallafsan. In buuxinta loo qaybiyo saami ahaan duvet oo dhan ayaa fure u ah badeecad tayo leh. Dhismo dheeman dhejis ah oo ku dheggan ayaa si fiican u buuxin doonta hadafkan. Duvet ka samaysan 100% suuf, kaas oo u oggolaanaya buuxinta inuu neefsado, oo leh dhisme cidhiidhi ah, oo qaabeeya dheemman, haddaba waa doorashada ugu fiican.
"Miisaanka garaamyada warqadda halkii mitir labajibbaaran" Tani waa sida ay RAE u qeexdo garaam, eray u adeega cabbir ahaan awoodda kulaylka ee duvet. Naxwaha ayaa sare u kaca, kulaylkuna wuu sarreeyaa. Si aad u doorato midka ugu habboon, waxaa lagama maarmaan noqon doonta in la tixgeliyo heerkulka jawiga qolkayaga iyo heerkulka jidhkeenna.
Mar kasta oo aan ka hadalno guri kulul oo heerkulkiisu uusan hoos uga dhicin 180ºC, a garaam dhan 200g / m2 waxay ku filnaan kartaa inay daboosho baahideena. Meelaha aadka u qabow oo aan ka badnayn 15ºC, si kastaba ha ahaatee, duvet culeyskiisu yahay ilaa 400g / m2 ayaa laga yaabaa inuu lagama maarmaan noqdo.
Hadda ma ka sii caddahay tixraacyada ay tahay inaad fiiriso si aad u hesho duvet ugu habboon?
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Guriga » Furayaasha doorashada duvet